यस्ता छन् कारण थकित हुनुका - ज्ञानविज्ञान
यस्ता छन् कारण थकित हुनुका
तपाईंले नियमित व्यायाय गर्नुभएको छ भने बिहान उठ्दा पनि फूर्तिलो हुनुहुन्छ । व्यायामले खुशी बनाउने हर्मोन निष्कासन गर्छ, यसबाट शरीर उर्जाशिल भइराख्छ र दिनभर खुशी बनाउँछ । तपाईले निरन्तर काम गर्दागर्दै काम गर्ने कार्यालयको भ¥याङ चढ्न गा¥हो त भएको छैन ? काममा अत्यधिक समय दिँदा स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा त परेका छैनन ? निश्चय नै कामको लोडले तपाईलाई तनाव उत्पन्न हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार तनाव स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने एउटा मन्द विष हो ।
Topics #कारण #थकित
Don't Miss it यी कुरा ध्यान दिनुपर्ने गर्भावस्थामा
Up Next यसो गर्नुहोस् अनुहारमा चाउरी पर्न नदिन